၂၀၁၉ အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ယောင်းတို့ရဲ့ အချစ်ရေး -
၂၀၁၉ အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ယောင်းတို့ရဲ့ အချစ်ရေး
Posted on January 2, 2019 January 2, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
အချစ်ရေး ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားကတော့ဖြင့်…
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်နဲ့ အချစ်သစ်ကို ရှာဖွေကြမယ်။ အယ်လဲ့ ရဲဇားရှိပြီးသားလူတွေကတော့ လူအဟောင်းနဲ့ပဲ အချစ်သစ်ကိုမွေးဖွားကြပေါ့အေ။ ဆိုတော့ ၂၀၁၈ မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှ အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်းတွေအားလုံးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး ၂၀၁၉ မှာတော့ ဘယ်လိုအသစ်သစ်သော အချစ်ရေးတွေနဲ့ ကြုံရမလဲဆိုတာကို ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်… ယောင်းတို့ကြည့်ရလွယ်အောင် ရာသီခွင်အလိုက် တစ်ခုချင်းစီဖော်ပြပေးထားပါတယ်လို့။
စင်ဂယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရဲဇားရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနှစ်ကတော့ Aries တွေ ဂေါ်မယ့်နှစ်လေးပါပဲ။ ငါသည်သာငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၊ ငါ့အတွက် ငါရှိတယ် စသည်ဖြင့် ငါတစ်လုံးဆောင် အိုတောင်စိတ်မဆင်းရဲဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလှဆုံးပြင်ဆင်၊ အတော်ဆုံးအထူးချွန်ဆုံးဖြစ်အောင် အဘက်ဘက်ကနေ ကြိုးစားပြီး တခြားဘယ်သူ့ကိုမှ မှီခိုနေစရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကလည်း အမြင့်ဆုံးရောက်နေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုပြင်းထန်လှတဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုလည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ ရည်းစားမရှိတဲ့ စင်ဂယ်ယောင်းလေးတွေက ချေချင်သလောက် ချေလို့ရပေမဲ့ ရည်းစားရှိတဲ့ယောင်းတွေကတော့ နည်းနည်းပြန်ပြီး ချေစိတ်ကို အချစ်နဲ့ ပြန်ထိန်းကြပါဦးလို့….
Taurus ရာသီဖွားယောင်းတွေရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ဒီနှစ်မှာကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပဲ ပြည့်စုံနေမှာပါ။ အချစ်ဆိုတာ ဒါပါလားလို့ခံစားရပြီး ကိုယ်ကလည်း အချစ်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် နည်းလမ်းအသစ်တွေကို သေချာရှာဖွေနေပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူမရှိတဲ့ယောင်းတွေကလည်း ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို ရှာတွေ့မယ့်နှစ်ဖြစ်ပြီး ချစ်သူရှိတဲ့ယောင်းတွေကလည်း ချစ်သူရဲ့သည်းသည်းလှုပ်ပြီး တုန်နေအောင်အချစ်ခံရတဲ့ နှစ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ယောင်းချစ်သူနဲ့ ယောင်းကဘဝအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖို့အတွက် စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်ရဲ့ သြဂုတ်လ ၂၄ က တူနှစ်ကိုယ်ဘဝကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
ပျော်ရွှင်သောဘဝ၊ ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ရေး ဆိုတဲ့ စကားကတော့ Gemini ရာသီခွင်ဖွားယောင်းတို့အတွက်ပါပဲ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသား ယောင်းတွေကတော့ တစ်နှစ်လုံးမှာ တကယ့်ကောင်းချီးတွေကိုပဲ ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး စင်ဂယ်ယောင်းယောင်းလေးတွေကတော့ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးနေသွားရမယ့် နှစ်လေးပါပဲ (ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ FA gonna be FA ပေါ့အေ 😛 ) ရည်းစားရှိတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေကတော့ ကိုယ့်အချစ်ရေးကို ကိုယ်ဘယ်လို ထိန်းချုပ်တည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါ ယောင်းတို့ရေ…
ဒီနှစ်အတွင်းမှာတော့ Cancer ရာသီဖွား ယောင်းတွေက နည်းနည်းတော့ ရုန်းကန်ရမယ့် အနေအထားတစ်ခုမှာ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အချစ်ရေးပေါ့။ ချစ်သူနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြားမှာ အဖုအထစ်ပေါင်းများစွာကို ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဖြေရှင်းဖို့မကြိုးစားဘဲ တစ်ယောက်ခံစားချက်ကို တစ်ယောက်ထည့်မတွက်ကြရင်တော့ ယောင်းတို့ရဲ့အချစ်ရေးက မာဂျင်အောက်ကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်အတွင်းမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရိုးသားကြဖို့၊ ပွင့်လင်းကြဖို့က အရမ်းအရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်လို့။ (စိတ်ထဲလည်း အရမ်းမထားနဲ့ဦး။ ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပဒ်တွေဖြစ်ကုန်မယ်။) စင်ဂယ်ယောင်းယောင်းတွေနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောင်းယောင်းတွေကတော့ ပုံမှန်လေးပဲ သွားနေပါလိမ့်မယ်။
ဒီနှစ်ကတော့ Leo ရာသီခွင် ယောင်းတို့အတွက်လည်း နည်းနည်းခက်ခဲမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရင်တုန်းက အချစ်ပန်းတွေ ပွင့်လန်းခဲ့သမျှ အခုချိန်မှာ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ ပြစ်ချက်တချို့ကို တခြားအချိန်တွေထက်ပိုမြင်လာပြီး လက်ခံဖို့ခက်ခဲတဲ့ အနေအထားတချို့ကိုလည်း ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ (ဗျာများရမယ်ပေါ့ ယောင်းရယ်။) ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို အချိန်ပိုပေးပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် မကောင်းတဲ့ အတွေးတစ်ခုခုဝင်တိုင်း တစ်ဖက်လှည့်ပြီး ပြန်ပြန်တွေးပေးပါ။ ရဲဇားမရှိသေးတဲ့ ယောင်းတွေကလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ အဖြေပေးမယ်လို့ စဉ်းစားပြီးမှ ရုတ်တရက်ကြီး အမြင်ကတ်လာပြီး နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာမျိုးပေါ့။ အိမ်ထောင်သည်ယောင်းတွေကတော့ အပြောင်းအလဲမရှိ ပုံမှန်အချစ်ရေးကိုပဲ ဖြတ်သန်းရမှာပါတဲ့ကွယ်…
အမြဲတမ်း လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားပြီး တွေးခေါ်တတ်တဲ့ Virgo ရာသီဖွားယောင်းတွေကတော့ ဒီနှစ်မှာ လက်တွေ့ထက် အပျော်ကို ပိုပြီး ဦးစားပေးပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း လျှောက်လည်နေမယ့်အစား သူငယ်ချင်းတွေ အုပ်စုလိုက်နဲ့ သွားလာနေရတာကို ပိုနှစ်သက်ကြမှာမို့ ရဲဇားရဲ့ ငြိုငြင်ခြင်းကို တော်တေ်ာခံရမယ့် နှစ်ပါ။ ရဲဇားမရှိသေးတဲ့ယောင်းတွေကလည်း အတည်တကျတွဲဖို့ မရည်ရွယ်ဘဲ ချိန်းတွေ့လိုက် ဒီအတိုင်းလျှော်ပစ်လိုက်နဲ့ အပျော်သဘောလောက်ပဲ ထားထားမယ့်နှစ်လေးပါ။
နည်းနည်းခလောက်ဆန်မယ်ပေါ့နော်။ ကိုယ့်အပေါ် မချေမငံဆက်ဆံသူမှန်သမျှကို (ချစ်သူပဲဖြစ်ပါစေဦး) ကိုယ့်ရဲ့တကယ့်အတွင်းစိတ်ထဲက ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်း ပြန်တုံ့ပြန်မှာမို့ ဒီရာသီဖွားယောင်းတွေအတွက်တော့ ပြဿနာများမယ့် နှစ်လေးတစ်နှစ် ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်မှန်တယ်လို့ လက်ခံထားတဲ့ အယူအဆတချို့ကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်ရမယ့် အနေအထားတချို့လည်း ရှိနေတာမို့ သတိထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ဒရာမာတွေနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ Scorpio ရာသီဖွား ယောင်းတွေကတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ဒရာမာဇုန်ကနေရုန်းထွက်ပြီး တည်တည်တံ့တံ့အချစ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ အရင်နှစ်တွေတုန်းက မှားခဲ့သမျှအမှားတွေအားလုံးကို သတိထားပြီး စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ဘဝအသစ်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းနေသားကျသွားမယ့် နှစ်ပါပဲ။
ထူးထူးခြားခြား ဒီ Sagittariusရာသီဖွား ယောင်းတွေကတော့ ကိုယ်နဲ့အရင်တုန်းကအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူတွေထဲကတစ်ယောက်နဲ့ပဲ အဆင်ပြန်ပြေမယ့်အနေအထားပေါ့။ အကယ်၍ ၂၀၁၈ မှာ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့ ယောင်းတွေကလည်း ကိုယ့်အဆက်ဟောင်းနဲ့ပဲ ပြန်တွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ (၂၀၁၈ ည ၁၁:၅၉ မှာပြတ်ပြီး ၂၀၁၉ မနက် ၁၂:၀၁ နာရီမှာပြန်တွဲသွားတာဖြစ်မယ် :P) ချစ်သူရည်းစားရှိပြီးသား ယောင်းတွေကလည်း ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ အိမ်ထောင်ကျပါလိမ့်မယ်တဲ့။ (ဖိတ်ဦးနော် ယောင်း :P)
Related Article >>> နှစ်သစ်မှာအကျိုးရှိစေမယ့် စာအုပ်(၂)အုပ်
အားလုံးထဲမှာ အတည်ငြိမ်ဆုံး ရာသီခွင်ပါပဲ။ ဘယ်ဂယက်ဝင်ဝင် အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြေရှင်းသွားမယ့် အနေအထားနဲ့မို့ တစ်န်ှစ်ပတ်လုံး သာသာယာယာလေးဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူဆီက ထူးထူးခြားခြားတုန့်ပြန်မှု သတင်းကောင်းတစ်ခုကို ကြားရပါလိမ့်မယ်တဲ့။
ထခဲ့သမျှဂယက်တွေထဲမှာ အလူးအလိမ့်ခံရပြီးနောက်မှာတော့ ဒီနှစ် ၂၀၁၉ မှာဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာချပြီး အတွေးအသစ်တွေနဲ့ ကိုယ်ချစ်သလောက်ပြန်ချစ်မယ့် ချစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်နှစ်ပါ ယောင်းတို့ရေ။ အိမ်ထောင်ကျကိန်းအထိ ရှိပါတယ်တဲ့ 😛
စိတ်ကူးယဉ်ဓာတ်ခံရှိတဲ့ Pisces ရာသီဖွားယောင်းတွေကတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ အဲဒီစိတ်ကူးနဲ့ အိပ်မက်တွေအားလုံး တကယ်ဖြစ်လာမယ့် နှစ်လေးပါပဲ။ ရည်းစားမရှိတဲ့ ယောင်းတွေကိုလည်း နှစ်စပိုင်းကတည်းက ဒိတ်ချင်တဲ့လူတွေ များနေမှာဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်သည် ယောင်းတွေကလည်း ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ ရိုဆန်မှုအပေါင်းကို သရဖူဆောင်းရတော့မှာပါ။
ကဲ ယောင်းက ဘယ်ရာသီခွင်ဖွားလဲ အချစ်ရေးအခြေအနေကရော ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို ပြောသွားခဲ့ဦးနော်… တစ်ခုရှိတာက ယောင်းရဲ့ ကံကြမ္မာကို ယောင်းကိုယ်တိုင် ဖန်တီးတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်.. ဒီဟောတမ်းတွေက ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါစေ၊ ယောင်းရဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ယောင်းရဲ့ ကံကြမ္မာအခြေအနေက ပြောင်းလဲမှာပါလို့…
References : romper, speakingtree
အခဈြရေး ဒီဇိုငျးကာလာ အနအေထားကတော့ဖွငျ့…
နှဈသဈမှာ စိတျသဈ၊ လူသဈနဲ့ အခဈြသဈကို ရှာဖှကွေမယျ။ အယျလဲ့ ရဲဇားရှိပွီးသားလူတှကေတော့ လူအဟောငျးနဲ့ပဲ အခဈြသဈကိုမှေးဖှားကွပေါ့အေ။ ဆိုတော့ ၂၀၁၈ မှာ ကွုံတှခေဲ့ရသမြှ အကြိုးအကွောငျး အဆိုးအကောငျးတှအေားလုံးကို လှငျ့ပဈလိုကျပွီး ၂၀၁၉ မှာတော့ ဘယျလိုအသဈသဈသော အခဈြရေးတှနေဲ့ ကွုံရမလဲဆိုတာကို ဆကျပွီးကွညျ့ကွညျ့ရအောငျနျော… ယောငျးတို့ကွညျ့ရလှယျအောငျ ရာသီခှငျအလိုကျ တဈခုခငျြးစီဖျောပွပေးထားပါတယျလို့။
စငျဂယျပဲဖွဈဖွဈ၊ ရဲဇားရှိတဲ့လူပဲဖွဈဖွဈ ဒီနှဈကတော့ Aries တှေ ဂျေါမယျ့နှဈလေးပါပဲ။ ငါသညျသာငါ့ရဲ့အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး၊ ငါ့အတှကျ ငါရှိတယျ စသညျဖွငျ့ ငါတဈလုံးဆောငျ အိုတောငျစိတျမဆငျးရဲဆိုတဲ့ ဆောငျပုဒျနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အလှဆုံးပွငျဆငျ၊ အတျောဆုံးအထူးခြှနျဆုံးဖွဈအောငျ အဘကျဘကျကနေ ကွိုးစားပွီး တခွားဘယျသူ့ကိုမှ မှီခိုနစေရာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကွညျခကျြကလညျး အမွငျ့ဆုံးရောကျနမှောပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျ့ရဲ့ဒီလိုပွငျးထနျလှတဲ့ ယုံကွညျမှုဟာ ကိုယျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောကိုလညျး စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစနေိုငျတာမို့ ရညျးစားမရှိတဲ့ စငျဂယျယောငျးလေးတှကေ ခခြေငျြသလောကျ ခလြေို့ရပမေဲ့ ရညျးစားရှိတဲ့ယောငျးတှကေတော့ နညျးနညျးပွနျပွီး ခစြေိတျကို အခဈြနဲ့ ပွနျထိနျးကွပါဦးလို့….
Taurus ရာသီဖှားယောငျးတှရေဲ့ အခဈြရေးကတော့ ဒီနှဈမှာကံကောငျးခွငျးတှနေဲ့ပဲ ပွညျ့စုံနမှောပါ။ အခဈြဆိုတာ ဒါပါလားလို့ခံစားရပွီး ကိုယျကလညျး အခဈြကိုဖျောပွဖို့အတှကျ နညျးလမျးအသဈတှကေို သခြောရှာဖှနေပေါလိမျ့မယျ။ ခဈြသူမရှိတဲ့ယောငျးတှကေလညျး ကိုယျ့လကျတှဲဖျောကို ရှာတှမေ့ယျ့နှဈဖွဈပွီး ခဈြသူရှိတဲ့ယောငျးတှကေလညျး ခဈြသူရဲ့ သည်းသည်းလှုပျပွီး တုနျနအေောငျအခဈြခံရတဲ့ နှဈပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အကယျ၍ ယောငျးခဈြသူနဲ့ ယောငျးကဘဝအသဈတဈခုကို စတငျဖို့အတှကျ စဉျးစားနပွေီဆိုရငျတော့ ဒီနှဈရဲ့ သွဂုတျလ ၂၄ က တူနှဈကိုယျဘဝကို တညျဆောကျဖို့အတှကျ အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။
ပြျောရှငျသောဘဝ၊ ပြျောရှငျသောအိမျထောငျရေး ဆိုတဲ့ စကားကတော့ Gemini ရာသီခှငျဖှားယောငျးတို့အတှကျပါပဲ။ အိမျထောငျကပြွီးသား ယောငျးတှကေတော့ တဈနှဈလုံးမှာ တကယျ့ကောငျးခြီးတှကေိုပဲ ခံစားရမှာဖွဈပွီး စငျဂယျယောငျးယောငျးလေးတှကေတော့ တဈယောကျတညျး အေးအေးဆေးဆေးနသှေားရမယျ့ နှဈလေးပါပဲ (ရှငျးရှငျးပွောရရငျတော့ FA gonna be FA ပေါ့အေ 😛 ) ရညျးစားရှိတဲ့ ယောငျးယောငျးတှကေတော့ ကိုယျ့အခဈြရေးကို ကိုယျဘယျလို ထိနျးခြုပျတညျဆောကျမလဲဆိုတဲ့ပျေါ မူတညျပွီး ပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ နှဈတဈနှဈပါ ယောငျးတို့ရေ…
ဒီနှဈအတှငျးမှာတော့ Cancer ရာသီဖှား ယောငျးတှကေ နညျးနညျးတော့ ရုနျးကနျရမယျ့ အနအေထားတဈခုမှာ ရှိနပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခဈြရေးပေါ့။ ခဈြသူနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ကွားမှာ အဖုအထဈပေါငျးမြားစှာကို ကွုံတှရေ့မှာဖွဈပွီး ဖွရှေငျးဖို့မကွိုးစားဘဲ တဈယောကျခံစားခကျြကို တဈယောကျထညျ့မတှကျကွရငျတော့ ယောငျးတို့ရဲ့အခဈြရေးက မာဂငျြအောကျကို ရောကျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနှဈအတှငျးမှာ တဈယောကျကို တဈယောကျ ရိုးသားကွဖို့၊ ပှငျ့လငျးကွဖို့က အရမျးအရမျးကို အရေးကွီးပါတယျလို့။ (စိတျထဲလညျး အရမျးမထားနဲ့ဦး။ ဥပါဒါနျကွောငျ့ ဥပဒျတှဖွေဈကုနျမယျ။) စငျဂယျယောငျးယောငျးတှနေဲ့ အိမျထောငျသညျ ယောငျးယောငျးတှကေတော့ ပုံမှနျလေးပဲ သှားနပေါလိမျ့မယျ။
ဒီနှဈကတော့ Leo ရာသီခှငျ ယောငျးတို့အတှကျလညျး နညျးနညျးခကျခဲမယျလို့ ထငျတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရငျတုနျးက အခဈြပနျးတှေ ပှငျ့လနျးခဲ့သမြှ အခုခြိနျမှာ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောရဲ့ ပွဈခကျြတခြို့ကို တခွားအခြိနျတှထေကျပိုမွငျလာပွီး လကျခံဖို့ခကျခဲတဲ့ အနအေထားတခြို့ကိုလညျး ကွုံတှရေ့မှာပါ။ (ဗြာမြားရမယျပေါ့ ယောငျးရယျ။) ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူကို အခြိနျပိုပေးပွီး ဖွဈနိုငျရငျ မကောငျးတဲ့ အတှေးတဈခုခုဝငျတိုငျး တဈဖကျလှညျ့ပွီး ပွနျပွနျတှေးပေးပါ။ ရဲဇားမရှိသေးတဲ့ ယောငျးတှကေလညျး ထိုနညျးတူပါပဲ။ အဖွပေေးမယျလို့ စဉျးစားပွီးမှ ရုတျတရကျကွီး အမွငျကတျလာပွီး နောကျပွနျဆုတျသှားတာမြိုးပေါ့။ အိမျထောငျသညျယောငျးတှကေတော့ အပွောငျးအလဲမရှိ ပုံမှနျအခဈြရေးကိုပဲ ဖွတျသနျးရမှာပါတဲ့ကှယျ…
အမွဲတမျး လကျတှကေ့ကြစြဉျးစားပွီး တှေးချေါတတျတဲ့ Virgo ရာသီဖှားယောငျးတှကေတော့ ဒီနှဈမှာ လကျတှထေ့ကျ အပြျောကို ပိုပွီး ဦးစားပေးပါလိမျ့မယျ။ ခဈြသူနဲ့ နှဈယောကျတညျး လြှောကျလညျနမေယျ့အစား သူငယျခငျြးတှေ အုပျစုလိုကျနဲ့ သှားလာနရေတာကို ပိုနှဈသကျကွမှာမို့ ရဲဇားရဲ့ ငွိုငွငျခွငျးကို တျောတျောခံရမယျ့ နှဈပါ။ ရဲဇားမရှိသေးတဲ့ယောငျးတှကေလညျး အတညျတကတြှဲဖို့ မရညျရှယျဘဲ ခြိနျးတှလေို့ကျ ဒီအတိုငျးလြှျောပဈလိုကျနဲ့ အပြျောသဘောလောကျပဲ ထားထားမယျ့နှဈလေးပါ။
နညျးနညျးခလောကျဆနျမယျပေါ့နျော။ ကိုယျ့အပျေါ မခမြေငံဆကျဆံသူမှနျသမြှကို (ခဈြသူပဲဖွဈပါစဦေး) ကိုယျ့ရဲ့တကယျ့အတှငျးစိတျထဲက ဖွဈနတေဲ့အတိုငျး ပွနျတုံ့ပွနျမှာမို့ ဒီရာသီဖှားယောငျးတှအေတှကျတော့ ပွဿနာမြားမယျ့ နှဈလေးတဈနှဈ ဖွဈမှာပါ။ ကိုယျမှနျတယျလို့ လကျခံထားတဲ့ အယူအဆတခြို့ကိုလညျး ပွောငျးလဲပဈရမယျ့ အနအေထားတခြို့လညျး ရှိနတောမို့ သတိထားဖို့တော့ လိုပါတယျ။
ဒရာမာတှနေဲ့ သိပျမဝေးတဲ့ Scorpio ရာသီဖှား ယောငျးတှကေတော့ ဒီနှဈအတှငျးမှာ ဒရာမာဇုနျကနရေုနျးထှကျပွီး တညျတညျတံ့တံ့အခဈြတဈခုကို ရှာတှသှေ့ားပါလိမျ့မယျ။ အရငျနှဈတှတေုနျးက မှားခဲ့သမြှအမှားတှအေားလုံးကို သတိထားပွီး စိတျသဈလူသဈနဲ့ ဘဝအသဈတဈခုကို ကောငျးကောငျးနသေားကသြှားမယျ့ နှဈပါပဲ။
ထူးထူးခွားခွား ဒီ Sagittariusရာသီဖှား ယောငျးတှကေတော့ ကိုယျနဲ့အရငျတုနျးကအဆကျအသှယျရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူတှထေဲကတဈယောကျနဲ့ပဲ အဆငျပွနျပွမေယျ့အနအေထားပေါ့။ အကယျ၍ ၂၀၁၈ မှာ ရညျးစားနဲ့ ပွတျသှားတဲ့ ယောငျးတှကေလညျး ကိုယျ့အဆကျဟောငျးနဲ့ပဲ ပွနျတှဲဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ (၂၀၁၈ ည ၁၁:၅၉ မှာပွတျပွီး ၂၀၁၉ မနကျ ၁၂:၀၁ နာရီမှာပွနျတှဲသှားတာဖွဈမယျ :P) ခဈြသူရညျးစားရှိပွီးသား ယောငျးတှကေလညျး ဒီနှဈအတှငျးမှာပဲ အိမျထောငျကပြါလိမျ့မယျတဲ့။ (ဖိတျဦးနျော ယောငျး :P)
Related Article >>> နှဈသဈမှာအကြိုးရှိစမေယျ့ စာအုပျ(၂)အုပျ
အားလုံးထဲမှာ အတညျငွိမျဆုံး ရာသီခှငျပါပဲ။ ဘယျဂယကျဝငျဝငျ အေးအေးဆေးဆေး တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ဖွရှေငျးသှားမယျ့ အနအေထားနဲ့မို့ တဈနျှဈပတျလုံး သာသာယာယာလေးဖွဈနမှောပါ။ ဒါပမေဲ့ ဇူလိုငျလနောကျပိုငျးမှာတော့ ကိုယျခဈြတဲ့လူဆီက ထူးထူးခွားခွားတုနျ့ပွနျမှု သတငျးကောငျးတဈခုကို ကွားရပါလိမျ့မယျတဲ့။
ထခဲ့သမြှဂယကျတှထေဲမှာ အလူးအလိမျ့ခံရပွီးနောကျမှာတော့ ဒီနှဈ ၂၀၁၉ မှာဆုံးဖွတျခကျြကို ခိုငျခိုငျမာမာခပြွီး အတှေးအသဈတှနေဲ့ ကိုယျခဈြသလောကျပွနျခဈြမယျ့ ခဈြသူ၊ လကျတှဲဖျောကောငျးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျရမယျ့နှဈပါ ယောငျးတို့ရေ။ အိမျထောငျကကြိနျးအထိ ရှိပါတယျတဲ့ 😛
စိတျကူးယဉျဓာတျခံရှိတဲ့ Pisces ရာသီဖှားယောငျးတှကေတော့ ဒီနှဈအတှငျးမှာ အဲဒီစိတျကူးနဲ့ အိပျမကျတှအေားလုံး တကယျဖွဈလာမယျ့ နှဈလေးပါပဲ။ ရညျးစားမရှိတဲ့ ယောငျးတှကေိုလညျး နှဈစပိုငျးကတညျးက ဒိတျခငျြတဲ့လူတှေ မြားနမှောဖွဈပွီး အိမျထောငျသညျ ယောငျးတှကေလညျး ကိုယျ့လကျတှဲဖျောရဲ့ ရိုဆနျမှုအပေါငျးကို သရဖူဆောငျးရတော့မှာပါ။
ကဲ ယောငျးက ဘယျရာသီခှငျဖှားလဲ အခဈြရေးအခွအေနကေရော ဘယျလိုရှိလဲဆိုတာကို ပွောသှားခဲ့ဦးနျော… တဈခုရှိတာက ယောငျးရဲ့ ကံကွမ်မာကို ယောငျးကိုယျတိုငျ ဖနျတီးတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့နျော.. ဒီဟောတမျးတှကေ ဘယျလိုပဲ ပွောနပေါစေ၊ ယောငျးရဲ့ ရှေးခယျြမှုနဲ့ စိတျဓာတျပျေါမူတညျပွီး ယောငျးရဲ့ ကံကွမ်မာအခွအေနကေ ပွောငျးလဲမှာပါလို့…
Tagged 2019, Fun, life, love, new, Sign, year, zodiac
ခရီးသွားတိုင်း ဗြောင်းဆန်သော သူငယ်ချင်း အမျိုးအစားများ
Posted on March 24, 2017 July 3, 2019 Author Miko
ရှိတယ်.. ရှိတယ်.. ဒီလို ဗြောင်းဆန်တဲ့သူတွေ ရှိကိုရှိတယ်… သက်ဆိုင်သူတွေကို မန်းရှင်းလေး ခေါ်သွားကြပါဦး…
ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ သွားဖို့ ပျော်စရာ ပွဲလေး (၅) ခု
၂၀၁၉ နွေရာသီအတွက် မဖြစ်မနေဆောင်ထားသင့်တဲ့ ခပ်လွင့်လွင့်ဂါဝန် (၆) ထည်